यस्तो सु -साईड नोट लेखेर जब यी युवकले आफ्नै ११ दिनको सुत्केरी श्रीमतीलाई सिध्याए र त्यसपछि ……. – Jagaran Nepal
यस्तो सु -साईड नोट लेखेर जब यी युवकले आफ्नै ११ दिनको सुत्केरी श्रीमतीलाई सिध्याए र त्यसपछि …….
Jagaran Nepal मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८
काठमाडौँ । भारतीय संस्कृति मा विवाह एक धेरै पवित्र सम्बन्ध मानिन्छ। जब एक केटा र एक केटी बिहे गर्छन्, उनीहरु अर्को सात जीवन संगै बाच्ने संगै मर्ने कसम लिएका थिए। तर यस्तै एउटा घटना उत्तर प्रदेशको सहारनपुरबाट प्रकाशमा घटेको छ जहाँ विवाह गर्दा सात जन्म संगै जिउने कसम खाएका जोडी सात बर्ष सम्म पनि टिक्न सकेन।
भारतको उत्तर प्रदेशको देवबन्दको धरमपुर गाउँमा एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ पतिले पहिले आफ्नी श्रीमतीको ह’त्या ग’रे र त्यसपछि आफै झु’ण्डि’एर दे’हत्या’ग ग’रे। उनीहरुले बिहे गरेको मात्र डेढ बर्ष भएको थियो । मात्र ११ दिन पहिले उनीहरुको घरमा एउटा छोरा जन्मिएको थियो। छोराको जन्पमेपछि युवकको घरमा खुसीको माहौल थियो, तर उनी आफ्नी श्रीमती संग चलिरहेको झ’ग’डा का कारण चिन्तित थिए।
ती युवकको नाम दिलीप र उनकी श्रीमतीको नाम प्रतिभा हो। दिलीपले आफ्नी श्रीमतीसँग रिसाएर उनलाई वि’ष दि’ए’र ह’त्या ग’रे, त्यसपछि उनले आफैंले दे’ह’त्या’ग गरे । यसो गर्नु अघि, दिलीपले एक सु’सा’इड नो’ट पनि लेखेका थिए जसमा उनले यसो गर्नुको कारण खुलाएका छन। उनले नोटमा लेखेका थिए कि उनी आफ्नो जीवनबाट धेरै दुखी छन्।
उनी भन्छन् कि जब उनको बिहे भयो उनको घरका सबै सदस्यहरु धेरै खुसी थिए तर उनी खुशी थिएनन्। उनी भन्छन् कि उनकी श्रीमती प्रतिभाले उनको घर भ’त्का’इन्। आफ्नी श्रीमतीको साथमा, सासुले पनि पवित्र सम्बन्धमा धेरै ग’म्भीर र ला’जम’र्दो आ’रो’प लगाउनुभयो। उनले अगाडि लेखे कि उनी बताउन सक्दैनन् कि उनी कसरी दिन प्रतिदिन बिताइरहेछन् र त्यसैले उनी प्रतिभालाई मा’र्दै’छन् र दे’ह’त्या’ग पनि गरिरहेछन्।
दिलीपले लेखेका छन् कि उनकी आमा आफ्नो मामाको घरमा गईरहेकी छिन् र उनी प्रतिभा र आफैंलाई उनको सबै कुरामा मा’रि’रहेकी छिन्। उनले भने कि उनको बच्चाको नाम यश हो र उनी आफ्नी आमालाई दिनु पर्छ। उनले यो पनि लेखे कि उनको आमा र बहिनीहरु नआउन्जेल सम्म उनको दाहसंस्कार गर्नु हुँदैन। दिलिपले नोटमा उल्लेख गरेको पवित्र सम्बन्ध सार्वजनिक लाजको कारण सार्वजनिक गर्न सकिएन।
यसो गर्नु अघि, दिलीपले यो नोट आफ्नो व्हाट्सएप स्टेटस मा अपलोड गरेका थिए साथै उनको मोबाइल फोन को पासवर्ड पनि नोट को अन्तिम भाग मा लेखिएको थियो। गाउँका मानिसहरु बताउँछन् कि दिलीप एक धेरै खुसी व्यक्ति थिए र उनको बुबा को मृत्यु पछि उनकी आमा र दुबै बहिनीहरु संग बस्थे। उनका दुबै बहिनीहरु पहिले नै उनीसंग बिहे गरिसकेका थिए।
रजनीश कुमारले पहिले समाचार प्राप्त गरेका थिए कि दुबै व्यक्तिले दे’ह’त्याग ग’रे’का थिए, तर पछि नोट प्राप्त गरेपछि यो स्पष्ट भयो कि दिलीपले पहिले आफ्नी श्रीमतीको ह’त्या ग’रे र त्यसपछि आफैले आफैलाई सिध्याए । दिलीप मात्र २ 26 वर्षका थिए जबकि उनकी पत्नी प्रतिभा २२ बर्षकी थिइन्। आफ्नो बच्चा को जन्म को अवसर मा र उत्तराखण्ड मा एक गार्ड को जागिर छो’डेर घर आए। अहिले यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।